Dalxiiska Xeebta Sorrento oo Kor U kacay Kadib Fasaxii Faafa ahaa ee Kaligii
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Italy War Deg Deg Ah » Dalxiiska Xeebta Sorrento oo Kor U kacay Kadib Fasaxii Faafa ahaa ee Kaligii
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Safarka • kariska • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Italy War Deg Deg Ah • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Xeebta Sorrento - Sawirka © Mario Masciullo
Xeebta Sorrento, oo ah mid ka mid ah meelaha dalxiiska Talyaaniga u yar, marka lagu daro Xeebta Amalfi, oo soo jiidatay qorayaasha iyo gabayaaga Grand Tour intii u dhaxaysay qarniyadii 18aad iyo 19aad, taasoo dhalisay qulqulka booqdayaasha caalamiga ah, ilaa xilligii masiibada ee masiibada, dib -u -soo -kabasho gaabis ah xagaagan 2021.
Xeebta Sorrento ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay soo jiidatay dalxiisayaasha Talyaaniga iyo dhowr ajaanib ah.
Xaaladdan ayaa gebi ahaanba dib loo rogay tan iyo 1919 waana soo kabasho xishood badan oo sugaya ku noqoshada wixii la soo dhaafay.
Maqnaanshaha waqti ka dib masiibada darteed ma uusan beddelin astaamihii iyo caadooyinkii Sorrento iyo dhulkeeda quruxda badan.
Gaar ahaan, qurbaannada cunnada ee waddaniga ah ee ay soo jeediyeen makhaayadaha iyo trattorias -ka Sorrento iyo magaalooyinka deriska ah, marka lagu daro makhaayadaha ay maamulaan kuugga xiddiglaha ah sida Il Buco iyo Donna Sofia, oo ah kan ugu dambeeya ee uu jecel yahay astaanta shineemada Talyaaniga ee Sofia Loren, ayaa weli u macaan sida abid.
Nasiib wanaag, wax walba isma beddelin faa'iidada booqdayaasha joogtada ah ee ku faraxsan inay helaan maareeyayaasha cunnada oo saaxiibo noqday waqti ka dib oo dib u ogaada cuntooyinka caadiga ah. Tani waa qaab ixtiraam sidoo kale loogu talagalay faa'iidada jiilalka cusub, kuwaas oo joogitaankooda la xusay dhammaadkii Luulyo.
Aragtida Hotel Mediterraneo iyo agagaarka dabaasha ee gaarka ah - Sawirka © Mario Masciullo
Dhaqanka Hoteelka ee Sorrento
Magaalada Sorrento liisaska hudheellada 120/30, oo u badan kuwa qoysku maamulo-waa dhaqan la soo saaray in ka badan boqol sano. Muddadan, tiro aad u wanaagsan oo dhismayaashu waxay noqdeen guryo sharaf leh oo ay ugu mahadcelinayaan waayo -aragnimada maamulka iyo kaalmada dhaqaale ee laga soo qaatay dalxiiska iyo wixii ka dambeeya.
MD iyo Pietro Monti, Hotel Mediterraneo, Sorrento - Photo © Mario Masciullo
Taariikh Dhacdo Xiise Leh
Sheeko xiise leh ayaa waxaa qoto dheer ka qotomiyey Sergio Maresca, Agaasimaha Maareeyaha (MD) ee Hotel Mediterraneo, oo dhaqankiisii ​​dheeraa ee martigelinta iyo isbeddellada jiilku ay socdeen in ka badan 100 sano, waxaana lagu tilmaamaa inuu yahay “taariikh kiis”.
Asal ahaan, huteelkani wuxuu ahaa guri gaar loo leeyahay oo la dhisay 1912 waxaana u beddelay hoteel Antonietta Lauro, “ayeeyo Etta,” walaashii mulkiilaha markabka Achille Lauro, ayeeyo-weyn iyo ayeeyo kuwa hadda maamula hoteelka.
“Qarniyo ayaa guulaystay oo lammaaneyaal cusub oo qoyska ah ayaa ku soo biiray meheradda, laakiin ruuxa soo dhoweynta ayaa sidiisii ​​ah. Annaga, kani had iyo jeer waa guri weyn oo marti u ah qoys ballaadhan oo cajiib ah wada -hawlgalayaashayada qaaliga ah iyo macaamiisheena hore iyo kuwa cusub iyo saaxiibbada, ”ayuu yidhi huteelka MD.
Cusboonaysii si aad u Wajahdo Mustaqbalka
Wax -ku -deeqsi ku -meel -gaar ah ayaa ka yimid sharciga Invitalia ee dib -u -habaynta 12 hoteel oo waaweyn oo ku yaal Sorrento. Ujeeddada hawlgalku waxay ahayd in kor loo qaado heerka tayada tas-hiilaadka hoteellada iyadoo loo qoondeeyay codsadayaasha deeq aan la bixin karin iyo daymo kabitaan ah.
Jasiiradda Sorrento, iyo waxyaabo kale, waxay u qalantaa marka la eego imaanshaha ku dhawaad ​​15% qulqulka Campania iyo 30% gobolka Naples, waxayna u dhigantaa qiyaastii 0.75% dhammaan dalxiiska hoteelka qaranka.
Marka la eego arrintan, xiisaha ayaa kiciyay baadhitaanka kiiska iyada oo waraysi la yeelatay Pietro Monti, Agaasimaha Suuqgeynta ee hantida kaliya ee aadka u qarniga ah ee aagga Sorrento, taas oo MD ka hadlay, taasi waa ka-faa'iideyste hindisaha dib-u-habaynta.
Amaahda, sida laga soo xigtay Piero Monti, waxaa loo maalgeliyey sidii loo hagaajin lahaa hudheelka iyadoo sawirku taagan yahay qayb kasta oo ka mid ah hoyga oo leh agabyo ka tarjumaya qaabka badda ee furaha casriga ah ee xarrago leh. Qaabka loo adeegsaday wuxuu ahaa xalal qaab dhismeed moodada leh oo aad u shaqeynaya oo lagu sameeyay alaab ceyriin ah oo xeebta-Vesuvian lava, sagxadda parquet-ka oo u eg tiirarkii lagu dhisay badda, nalalka kalluumeysatada oo kale ah, iyo qurxinta iyo armaajooyinka naxaasta ah-maaddada farsameynteedu leedahay xididdadiisu waxay ku jirtaa dhaqanka Neapolitan.
Goobta cuntada ee maqaayadda Donna Sofia waxaa loogu talagalay martida gaarka ah - Sawirka © Mario Masciullo
Waxaa lagu daray tan waa qeybta caloosha iyo isbadalka barxaddeeda oo loo rogay SkyBar qurux badan oo leh muuqaal muuqaal leh oo ka sarreeya Bay ee Naples ilaa volcano Vesuvius. Doonida matoorka ee awoodda badan ayaa diyaar u ah martida si ay ugu safraan jasiiradda u dhow ee Capri ama meel kale. Dayactirka iyo adeegyo cusub oo ay ku jirto xeeb gaar loo leeyahay ayaa huteelka ka helay xiddig kale, taasoo maanta ka dhigtay huteel 5-xiddig leh.